Taliska AMISOM oo war cad kasoo saaray dadkii ay dhawaan ku laayeen deegaanka Calamada – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Taliska AMISOM oo war cad kasoo saaray dadkii ay dhawaan ku laayeen deegaanka Calamada
Bayaan kasoo baxay taliska AMISOM ayaa lagu sheegay in AMISOM ay ka xun tahay shil dhawaan ka dhacay deegaanka Calamada oo ku taala waddada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye.
Shilkaasi ayay AMISOM ku sheegeen inuu ahaa mid ka dhashay baabuur ay saarnaayeen dad shacab ah iyo baabuur AMISOM oo isku dhacay, taas oo keentay inay dad badan oo shacab ah ay dhimasho iyo dhaawac kasoo gaarto.
“Warbixino horudhac ah ayaa sheegaya in gaari caasi ah oo ay saarnaayeen rakaab uu isku dayey inuu dhinac dhaafo baabuurka AMISOM, hase yeeshee uu ka horyimid gaari kale, kadibna isaga oo ka cararayaa inuu fool ka fool ugu dhaco gaariga kale ayuu gaariga rakaabka ku dhacay baaburka AMISOM” Ayaa lagu yiri bayaanka AMISOM.
Bayaanka ayaa soo kale lagu sheegay in shilkaas uu dhaliyay dhimashada afar qof iyo dhaawaca 14 kale.
“Waxay AMISOM si qoto dheer uga qoomameyneysaa shilkaan musiibada iyo nasiib darrada ah, waxayna kala kulmeysaa dhacdadaan booliiska Soomaaliya, maamulka deegaanka iyo odayaasha” Ayaa lagu xusay bayaanka.
Ugu dambeyntii, bayaanka AMISOM kasoo baxay ayaa lagu sheegay in iyadoo kaashaneysa hay’adaha dowladda federaalka Soomaaliya ay baaritaan ku sameyn doonaan dhacdadaan ayna faah-faahin dheeri ah oo gudbin doonaan dhawaan.